Faa'iidooyinka Of Solar Powered Signalka tareenada Goynaya Oo Road Calaamadaha | Save A tareenka
Home > Safarka tareenka > Faa'iidooyinka Of Solar Powered Signalka tareenada Goynaya Oo Road Calaamadaha
Warku kordhaya dhinaca in ay ka badan deeggaanka u fiican ayaa keentay badan, iyo kala duwanaayeen dadaallada cagaaran dunida, ee magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka yar yar si isku mid ah. Mid ka mid ah calaamadaha qaar badan oo ka mid ah waxaa loo isticmaalka sii kordhaysa oo ah tamarta la cusboonaysiin karo nolol maalmeedka dadka iyo shaqada dhinacyo ay marnaba la tixgeliyey ikhtiyaarka ah ka hor inta. Mid ka mid ah meelaha sida uu yahay ammaanka waddooyinka, halkaas oo la adeegsadaa iyada oo wax kasta oo ka calaamadaha wadada samaafarayaasha in nidaamka digayaan, sidaas samaynta xaaladaha wadada dheeraad ah la arki karo at a qiimaha jaban, iyo sidoo kale badbaadinta labada lacag iyo meeraha hawsha ku jira.
Iyadoo calaamadaha wadada aadan u baahnayn in la shiday inay sameeyaan shaqo, nalalka hubaal leeyihiin faa'iido ah daray samaynta wadayaasha dheeraad ah ka war. calaamadaha wadooyinka Solar-powered qalabaysan nalalka LED siiyaan hab loogu talagalay aragti wanaagsan, labadaba inta lagu jiro maalinta iyo habeenkii (Waxaad ka heli karaa war dheeraad ah oo ku saabsan mabaadiida ay hawlgalka halkan) Waxay bixiyaan a kala duwan operative wanaagsan xitaa inta lagu jiro xaaladaha adag cimilada taas oo inta badan la abuuro xaalado shil-nugul. Marka laga meeshoodii - at isgoysyada, laysaan ama isgoysyada tareenada, calaamadahani waxay xaqiijinayaan nabadgelyada weyn ee dadka lugaynaya iyo baabuurtaba.
Faa'iidooyinka Waaweyn ee Solar-Powered Road Calaamadaha
Faa'iidada weyn oo faa'iido ah calaamadahan waa xaqiiqda ah in tamarta in cunto siiya kama iman gubanaya duidu. Waxa aanu nijaasaysaan sidii in dhuxusha, saliidda, oo yeela gaaska, taas oo waxa ay taasi 100 boqolkiiba deegaanka dhibaato u keeneyn. Shardiga kaliya waxaa ku filan saacadood qoraxdu si iftiinka qoraxda in la goostay, diinta iyo ku kaydsan sanad-dheer isticmaalka. Sida adag sida laga yaabaa in shuruud this u muuqdaan, mar eedeeyay, rakibo waa run ahaantii dhaqaale sababta oo ah dareenka dhaqdhaqaaqa, kaas oo awood u posts sidan oo kale in ay ku shaqeeyaan oo kaliya marka ay jirto gaadiidka dhabta ah ee wadada, halkii saacba. isticmaalka tamarta qoraxda waxaa wajiyo badan iyo runtii xiiso, ma waxay?
Tan iyo markii la rakibo, kuwaas oo ay adag tahay in ay iska indha, waxay kor loogu qaado wacyiga ee darawalada iyo dadka lugta ah ee roundabouts, in la dhigto, meelaha khatarta ah in lagu yaqaan inay shilalka sababta, iwm. Xaqiiqada ah in iyagu ma ay u baahan tahay oo silig ama ilo koronto u dhow in ay ku shaqeeyaan waxay suuro gelineysaa in iyaga meel kasta oo meel, ka sokow xaqiiqda ah in ay dhab ahaantii Qiime jaban iyo low-dayactirka. lacagta oo dheeraad ah waa xaqiiqada ah waxay yihiin si fududahay in la rakibo - waxay lagu lifaaqi karaa sidoo kale in ay posts joogtada ah ama mid la qaadan karo, waayo, dhaqdhaqaaqa weyn. Tani weyn oo iyaga ka dhigaa inta lagu guda jiro roadworks, sida la soo gelin karaa oo laga saaray in ficil ahaan ma waqti badan oo aan keenaya carqalad si dhabooyinka dhow.
Signalka tareenada Solar
calaamadaha isgoyska tareenka in isticmaalaan tamarta qoraxda oo loo isticmaali karo in labada aag warshadaha iyo meelaha baadiyaha ah. Products noocan ah, sida https://www.solarlightingitl.com/solar-railroad-crossing-systems/ ogaado tareenada ku soo dhowaada iyada oo loo marayo dareemayaasha wireless-ka, iyo marka ay hesho signalka, ay dhaqaajiso nalalka isgoyska iyo codka kuwa u taga ilaa tareenka ayaa ka gudbay oo nabdoon tahay in ay ka gudbaan tareenka. Signalladaasi waa sida caadiga ah oo laba laba u tagaan dhinac kasta oo ka mid isgoyska tareenka, iyo link a wireless iyaga badalato iyo off waqti isku mid ah. Malaha waxa ugu fiican ee ku saabsan rakibidda kuwa waa xaqiiqada ah in aysan jirin sanduuqyada dibadda ama fiilooyinka dheer ku lug.
Nidaamka oo dhan ku tiirsan tamarta qorraxda in ku filan waa in la soo dhaafay 10 saacadood oo shaqo ah aan guraynin mar si buuxda u soo oogay, laakiin waxa uu leeyahay gurmad batari, waa inuu jiraa la'aan buuxda oo iftiinka qoraxda marka tamarta ururay waa daallan. Nidaamka waxaa sidoo kale mararka qaarkood kaliya shaqeysiin haddii shuruudaha barnaamijkii qaarkood la buuxiyo, sida xawaaraha gaar ah, at kaas oo tareenka u dhowaanin guurayaan, tusaale ahaan. Waxaa kor lagu hagaajin karo in kaliya dab afuuftaan haddii qiimaha ay ka badan tahay 65 mph iyo iska indha gaadiidka, dhaqaaqin gaabis ah ka badan in. Options waxaa kala duwanaayeen.
Inkastoo tamarta cagaaran wali si buuxda daro nolosha qofka caadiga ah weli, waxa aan arki karnaa in ay joogaan iyo isticmaalka koraan by daqiiqadii, galaya dhinacyo badan oo ka mid ah nolosha. run ahaantii Waa mustaqbalka dhulkeenna iyo ka dhigan hab deegaanka u-miyir qabo in ay horumar ka laabtaada aan sii waxyeelo dheelitirka jilicsan oo jilicsan ee dabiiciga ah in horay loo keiya saamaysay nin. waddooyinka iyo tareenada xal tamarta qoraxda ku shaqeeya waa tusaale wanaagsan oo wax ku ool ah, codsiyada smart oo jaban of a khayraadka dabiiciga weyn.
Waxaan danaynayaa deegaanka oo aan jeclahay farshaxanka safraya. Bilow tayaasha safar tareen leh Save A tareenka, maanta!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Faa'iidooyinka Of Solar Powered Signalka tareenada Goynaya Oo Road Calaamadaha” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/solar-powered-railroad-crossing-signal/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
In link soo socda, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, link this waa wadooyinka Ingiriisi bogagga degtey, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / PL inay / TR ama / es iyo luqado badan oo aad dooratay.
EcoFriendlyTravel GreenEnergy Wax soosaarka warshadaha Tamarta Cusboonaysiinta SolarEnergy tareen safarka